DEG-DEG: Barcelona Oo Burburinaysa Heshiiska LABA Ka Mid Ah Xiddigaheeda Waaweyn - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Barcelona Oo Burburinaysa Heshiiska LABA Ka Mid Ah Xiddigaheeda Waaweyn
DEG-DEG: Barcelona Oo Burburinaysa Heshiiska LABA Ka Mid Ah Xiddigaheeda Waaweyn
July 4, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka La Liga 0
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayuu kasoo yeedhayaa war kale oo weyn oo meesha ka saaraya laba ka mid ah xiddigaheeda waaweyn, kuwaas oo ay burburinayso qandaraasyadii ay kula jirtay.
Barcelona ayaa ka takhalusaysa xiddigaha mushaharka badan ka qaata ee aan nacfiga badan u lahayn, waxaanay oodda ka qaadaysaa laba ciyaartoy oo ay suuqa dhigtay laakiin aanay jirin cid si rasmi ah uga soo dalbatay, kaddibna ay qaadatay go’aan ah in ay heshiiskooda burburiso.
Sida uu hadda shaaciyey wargeyska Mundo Deportivo, Barcelona ayaa go’aansatay in ay kansasho heshiisyadii ay kula jirtay xiddiga khadka dhexe ee Miralem Pjanic oo sannad ka hor uga soo wareegay Juventus, kaas oo xilli ciyaareedkii hore ku dhamaystay kursiga kaydka.
Pjanic ayaa qayb ka ahaa heshiiskii uu Arthur ku tegay Juventus, iyadoo labada ciyaartoy lagu kala qiimeeyey $67.4 milyan oo dollar oo Pjanic ahaa iyo $81 milyan oo dollar oo Arthur ku qiimaysnaa, waxaanay kooxda reer Spain qaadatay farqiga u dhexeeya labada qiimeyaal iyo Pjanic.
Wargeyska ayaa intaa ku daray, in Barcelona ay go’aansatay in ay kansasho difaaca reer France ee Samuel Umtiti oo shantii sannadood ee ugu dambeeyey ka ciyaarayay Camp Nou.
Umtiti ayaa sannadkii 2016 waxay Barcelona kula soo wareegtay 25 milyan oo Euro, hase yeeshee saddexdii xilli ciyaareed ee u dambeeyey ayuu dhaawacyo ku seegay 63 ciyaarood oo horyaalka ah, halka uu kaliya 40 kulan oo horyaalka ah ka qayb-qaatay.
Dhaawac jilibka ah oo Umtiti kusoo noqnoqday ayaa wiiqay awooddiisii ciyaareed iyo wixii ay ka filaysay Barcelona in ay ka hesho, waxaana tiraba dhawr jeer lala xidhiidhiyey kooxo ay ku jirto Arsenal balse cid dalab rasmi ah kasoo gudbisay ayaanay helin kooxda reer Spain.